Hoteel caalami ah oo lagu eedeeyay inuu faafiyay sawirka haweeney qaawan - BBC News Somali
Haweeney ka soo jeedda gobolka, Chicago ee dalka Maraykanka ayaa maxkammad la tiigsanaysa shirkadda Hhoteellada caalamka ee Hilton, waxayn dalbanaysaa in magdhow ahaan loo siiyo lacag gaareays boqol milyan oo dollar, waxayna arrintaasi sabab uga dhigtay in si qarsoodi ah muuqaal looga duubay iyadoo qubaysanaysa, waxaana muuqaalladaas lagu faafiyay bogag badan oo galmada looga hadlo.
Haweeneydan oo magaceeda aan la shaacin ayaa hoteelkan weyn ku eedeysay dayacaad, taas oo ay sheegtay inay u geysatay dhaawac maskaxeed iyo mid niyad oo aan laga soo kaban karin iyo waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin kharashaadkii ay isku daweysay iyo dhaqaalaha ku baxay.
Haweeneydan ayaa degganayd hoteelka Hampton Inn and suites ee ku yaalla Albany, ee caasimadda gobolka New York ee dalka Mareykanka.
Dhacdadan ayaa dhacday sanadkii 2015kii, kaddib markii ay ka qalin-jebisay kuliyadda sharciga.
Dacwadda ay gabadhan soo gudbisay oo 19 bog ka kooban ayaa lagu sheegay in suuliga ay ku qubeysanaysay lagu xiray kaamirooyin sir ah, sidoo kalena laga duubay muuqaal iyadoo qaawan.
Waxay arrintan ogaatay bishii sagaalaad ee sanadkan, saddex sano kaddib markaas oo loo soo diray email iyadoo lagu wargelinayo "qofkan ma adigaa?" waxaa kale oo warbixinta ku qoran in lala wadaagay lifaaq bog toos u geynaya halkaas oo magaceeda oo dhammeystiran lagu qoray.
Markii cabsi-gelinta loo jeedinayo ay dheg jalaq u siin weyday, muuqaalkeeda ayaa waxaa lagu daabacay bogag kale oo lagu faafiyo galmada.
Intaas kaddib asxaabteeda oo dhan ayaa helay muuqaal cusub oo laga soo diray cinwaan been abuur ah oo magaceeda uu ku qoran yahay.
Dadkii muqaalkaas duubay ayaa gabadha cabsi geliyay kana dalbaday inay siiso $2,000 dollar muddo sanad ahna ay bil walbo bixiso $1,000. Waxayna sheegeen in dad kale muuqaal qarsoodi ah looga duuubay qolkaas ku yaalla hoteeka Hampton Inn.
"Aad ayaan uga taxadarnaa badqabka martida hoteelkeenna deggan'' waxaa sidaas yiri afhayeen u hadlay hoteelka Hilton.
"Eedeymahan waan la yaabay waana ka argagaxay .'' ayuu afhayeenka hotelka yiri.
"Badqabka iyo ammaanka martideenna ayaa ah mudnaanteenna ugu sarreysa, mana aqbali karno in lagu xadgudbo xuquuqda u gaarka ah shakhsiga'' ayaa warbixinta shirkadda hoteellada lagu sheegay.
Hoteelka ayaa mar dhaw lagu sameeyay dayactir, xilligaas oo aan qolalka laga dhex helin kaamirooyin qarsoon, balse maamulka hoteelka waxaa uu ballan qaaday in uu la shaqeyn doono saraakiisha ammaanka si gacanta loogu dhigo cidda falkan ka dambeysay.